Wasiirro reer Somaliland ah oo oo ku dhaawacmay shil gaari & caaqil ku geriyooday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Berbera – Mareeg.com: Shilal gaari oo maanta ka dhacay inta u dhexeysa Berbera iyo Sheekh ayaa sababay geerida oday dhaqameed la oran jiray caaqil Cabdi Cigaal (Hadoodil) oo ka mid ahaa dadweynihii soo dhoweynayey weftiga madaxweynaha maamulka Somaliland oo ku socday Berbera.
Waxaa sidoo kale Shil-baabuur galay Wasiirada Wasaaradaha Caafimaadka iyo Warfaafinta oo qayb ka ahaa Waftiga Madaxweyne Siilaanyo, waxaana Labada Wasiir soo gaaray dhaawacyo.
Wasiirka Warfaafinta Somaliland, Maxamed Cabdillaahi Daahir (Cakuuse) iyo Wasiirka caafimaada Saleebaan Axmed Ciise (Xagla toosiye) ayaa kamid ahaa wefdiga Madaxweynaha Somaliland Siilaanyo oo maanta ka soo kicitimey magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wefdiga ayaa safar ku ahaa xarunta Somaliland ee Hargeysa, waxaana shilku qabsadey markii ay marayeen tuulada Hundusa ee ku dhaw Degmada Shiikh.
Gaadiidkiii Wasiirka Warfaafinta Somaliland, Cabdillaahi Cukuse iyo Wasiirka Caafimaadka Saleebaan Ciise Xaglo toosiye ayaa isku dhacay taas oo dhaawac ka soo gaadhay labaddaaasi wasiir, afhayeenka madaxweynaha Axmed Saleebaan dhuxul iyo gudoomiyihii hore ee ururka saxaafadda SOLJA Mustafe Shiinne.
Dhaawaca masuuliyiintan ayaa la keenay cisbitaalka Berberta, waxaana isku duwaha Caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr: Cabdirixiim Cajab uu sheegay inay dhaawac fudud yihiin, isla markaana ay xaaladoodu fiican tahay, isagoo sheegay in wasiiirka Warfaafintu ka jabay gacanta midig, halka masuuliyiinta kale dhaawac muuqdaa soo gaarin.
Shilalka waddooyinka ayaa aad ugu badan waddooyinka deegaanada Somaliland, waxaana shilka ku dhacay wafdiga Siilaanyo loo aaneeyeey, iyadoo ay la socdeen gaadiid farabadan oo galbinayey.
Shacabka Jowhar oo debadbax uga horjeestay dhac loo geystay nin ganacsade ah